Esi tọgharịa Apple Watch ma ọ bụrụ na ị chefuru koodu mkpọghe | Akụkọ akụrụngwa
Ezie na enwere nsogbu ole na ole nwere ike ibilite mgbe ị na-eji Apple smartwatch, ọ kachasị mma ịmara tupu oge eruo esi tọgharịa Apple Watch na ntọala ụlọ ọrụ ma ọ bụrụ na ịchefu koodu mkpọghe.
Apple Watch bụ otu n'ime ekwentị ndị kachasị ewu ewu n'ụwa, yana ahịa na-enweghị atụ na kọntinenti ọ bụla. Ihe mere o ji nwee ihe ịga nke ọma dị ọtụtụ, ma karịa ihe niile, ha na-eme ntụkwasị obi nke ngwa a na eziokwu na ọ na-arụ ọrụ ebube n'ọtụtụ ọnọdụ.
Ọ bụ ezie na ị nwere oge mgbe ị adịghị nwayọ ịnyagharịa menu gị ma ọ bụ bido ngwa ngwa nwayọ, Apple Watch fọrọ nke nta ka ọ daa kpamkpam. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ ikpe ebe ọ ga - adị mma ma ọ bụrụ na ịmara etu ị ga - esi tọgharịa Apple Watch na ntọala ụlọ ọrụ.
Ọ bụrụ na i chefuola koodu ịkpọghe gị Apple Watch, ọ bụrụ na ị gbalịrị itinye ya ọtụtụ ugboro ma chọpụta na ọ nweghị ụzọ ịkọ nkọ, ihe kachasị mma ị nwere ike ime bụ tọgharịa smartwatch. N'okwu a, ị nwere nhọrọ abụọ. Enwere ike ịme nke mbụ site na menu ekwentị, ọ bụrụ na ị nwere Apple Watch jikọtara ya na iPhone. Nke abụọ achọrọ ijikọ elekere na eriri USB.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịnweta menu Apple Watch, ị kwesịrị bido ngwa elekerekwa akpọ Apple Watch, site na isi ihuenyo nke iPhone ma gaa n'ihu nchịkọta nhọrọ. Na saịtị ahụ, ị ​​kwesịrị ị na-ele anya maka Tọgharia nhọrọ (Weghachi). Pịa na bọtịnụ "ichicha ọdịnaya Apple Watch na Mwube" ma ọ bụ "Kọwaa ọdịnaya na ntọala Apple Watch”Ma na-egosi na nrụpụta usoro. Nwere ike mkpa ịbanye Apple ID paswọọdụ metụtara na ekwentị gị na-ekiri.
Usoro nrụpụta nke abụọ anaghị achọ elekere iji jikọọ na mkpanaka ahụ, ma ị ga-achọ eriri mbụ maka Apple Watch.
Tinye nche ka oji ugwo na iji eriri ma pịa ogologo na bọtịnụ n'akụkụ na ala. N'oge ole na ole, nhọrọ maka mmechi zuru ezu na SOS kwesịrị ịpụta. N'oge ahụ, Mee ka ihuenyo Apple Watch sie ike ruo mgbe ọ na-ama jijiji na nhọrọ nke atọ ga-apụta - Hichapụ ọdịnaya niile na ntọala niile - nhọrọ ị ga - ahọrọ iji tọgharịa elekere na ntọala ụlọ ọrụ, usoro ga - ewe n’agbata nkeji iri na iri na ise. Emechaa, ị nwere ike ijikọ elekere gị na iPhone ọzọ.
Ọ dị ezigbo mkpa ịmara nke ahụ ụzọ ndị dị n'elu agaghị enyere gị aka ihichapụ akaụntụ iCloud metụtara Apple Watch. An Apple smartwatch nwere ike ịnọgide na-ekpochi ruo mgbe ebighị ebi ma ghọọ ihe ịchọ mma dị mfe ma ọ bụrụ na ị maghị aha njirimara na paswọọdụ iCloud nke ejiribu maka ojiji ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Esi tọgharịa Apple Watch na ntọala ụlọ ọrụ ma ọ bụrụ na echefuru koodu mkpọghe